/blog/Boldenone/Boldenone Undecylenate: 8 Saameynaha Waxyeelada Waxyaabaha Aad Doonayso Inaad Ka Badbaadisid
Posted on 04 / 08 / 2019 by Dr. Patrick Young ku qoray Boldenone.
Waxkasta oo ku saabsan Garcinia Boldenone Undecylenate
1. Waa maxay Qalabaynta (Boldenone Undecylenate)
2. Qalabaynta (Boldenone Undecylenate) sifooyinka
3. Dhibaatooyinka (Boldenone Undecylenate)
4. Qalabaynta (Boldenone Undecylenate) Cycle and Dosage
5. 8 Equipoise (Boldenone Undecylenate) waxyeellooyinkaaga waxaad u baahan doontaa inaad iska ilaaliso
6. Qalabaynta (Boldenone Undecylenate) Cuntada Homebrew
8. Halkee laga helaa Boldenone?
Waa maxay Qalabaynta (Boldenone Undecylenate)
Equipoise(Boldenone Undecylenate) waa tijaabo ka sameysan tijaabada unugyada anabolic-androgen (XK) kaas oo ku jiray suuqa tan iyo 1940s. Waxaa jira tiro ka mid ah qiyaasaha Boldenone oo ay ku jiraan Boldenone Cypionate, Boldenone Acetate.
Marka la barbar dhigo, qalabkii waxaa loo adeegsaday oo kaliya dhakhaatiirta xoolaha illaa iyo xilliga dambe 1950s marka Ciba ay soo bandhigtay heerka bini'aadamka. Cilmi-baadhayaashu waxay diyaariyeen qalabka fardaha si loo hagaajiyo rabitaankooda iyo sidoo kale qulqulka murqaha.
Dhismaha jirka ee isticmaalay waxaa lagu riyaaqay saamaynta baaxada leh ee fayadhowrka la isku qurxiyo. Si lagu daro, taasi ma aysan dhicin meel ka mid ah biyaha sii-hayntu ma jirin meel ujeeddo xun ee naxdinta leh.
Waxaa laga heli karaa goobta caafimaadka illaa 1970s ka dib markii laga saaray. Ahaanshaha muraayad dhif ah, waxaa kaliya oo laga heli karaa iyada oo loo marayo caafimaadka xoolaha iyo dhowr suuqyo. Waxay leedahay qaar ka mid ah magacyada ganacsiga oo ay ka mid yihiin Bold-one, Bold Project, Boldane, Boldebolin, Equigan, iyo Equidex iyo kuwo kale.
Qalabaynta (Boldenone Undecylenate) sifooyinka
Badanaa xubnaha jidhka ayaa isku dayaya in ay isbarbardhigaan Deca iyo Equipoise. Labada nooc ee steroids ayaa ugu dambeyntii ku jira xajinta murqaha iyo sidoo kale koritaanka xoogga jirka. Labaduba waxay ku guuleysteen tan iyada oo la kordhinayo dheellitirka borotiinka. Mid ka mid ah khilaafaadka ayaa ah in dadka isticmaala 'Deca' ay raacaan daaweyn xeel dheer oo rikoodh ah oo loo yaqaan 'estrogen-ka' taasoo sababtay.
Qaar ka mid ah daawooyinka ay kuwa jidhka u adeegsadaan PCT waa Nolvadex, Clomid, iyo Arimidex. Tani waa mid ka mid ah sababaha badan ee dhismaha jirdhiska oo tixgelinaya isticmaalka Equipoise. Arrin kale oo la leh Deca waa in uu ku jiraa nidaamka mid ka mid ah wakhti aad u badan. Maadaama ay jidhkaagu ku fiicnaan karto muddo labo sano ah, ciyaartoyda imtixaanku si joogto ah u doorbidaan isticmaalka Equipoise. Waqtiga loo yaqaan 'Equipoise Detection Time' wuxuu qiyaastii shan bilood.
Marka ay timaaddo saameynta daawada qotodheer waxtarka leh iyo waxyeelada diiqadda, qalabku wuxuu qaataa maalinta. Cudurka daboolka waxaa loo yaqaanaa inuu sababo waxyeelo soo noqnoqda sida finanka, timaha wajiga, iyo timo lumis halka uu Deca badanaa ku xiran yahay hannaanka dareeraha iyo ginecomastia.
Deca waa doorasho aad u fiican oo loogu talagalay kuwa raadinaya bulkooga inta badan qalab loo isticmaalo jarista wareegyada. Lama yaabin dadka intooda badan waxay door bidaan isticmaalka boldenone goynta maaddaama ay bixiso natiijooyin fiican.
Si loo wada dhufto, Equipoise wuxuu jacayl badan ka helaa qof kasta sababtoo ah guulaha aadka u gaabis ah, laakiin kasbaday waxa uu ku siinayaa marka la eego xoogga muruqyada iyo xajmiga adigoon kuusin dhibka ku haysashada dhibaatooyinka hiddaha 'estrogenic'. Waxay kaloo noqon kartaa qayb ka mid ah wareegga dheer. Intaa waxaa dheer, Equipoise ayaa garaacday Deca gacmaheeda marka ay timaado dhiirigelinta wax soo saarka unugyada dhiigga cas iyo dhiirigelinta rabitaanka cuntada.
Boldenone Undecylenate waxay la wadaagaan qaar la mid ah testosterone marka ay timaado ballaarin ballaaran. Labada nooc ee steroids waxay yihiin kuwo guuleysta oo badana awood u leh:
Nitrogar qaadista ayaa keenta koritaanka murqaha ama halkii lagu sii hayn lahaa.
Yaree tirada tirada hormoonnada glucocorticito
Ka hortagga glucocorticoids waxay sii deyneysaa burburinta borotiinka ee qaybaha yaryar sida amino acid. Taasi waxay ka dhigan tahay in labadaba testosterone iyo qalabixinta ay gaabin karaan wejiga caamka ah ee metabolismka.
Iyada oo hoos udhaca hormoonnada glucocorticoid, xaddiga waqtiga muruqyadaadu ay ka soo kabanayaan ka dib marka tababarku si weyn u yareeyo.
Waxyaalaha koritaanka Insulin-Like-Like 1 (IGF-1) waxay ka caawisaa taranka iyo dib u soo celinta unugyada jirka oo dhan. Sidaa awgeed, waxaa jira abuuritaanka muruqyo waaweyn iyo ka hortagga muruqyada. Equipoise iyo Hormoonkaas kordhinta wax soo saarka IGF-1 taas oo markaa dhiiri gelisa jirka jirka.
Kobcin naqshadaynta borotiinka
Qaadadu waa shaki la'aan mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee jirka. Waa maxay waxa jirka ka dhigaya inuu koro ama isbedelo. Marka jirku ku jiro dheellitir dheellitirnaan oo dheellitiran, waxaa jira horumarin muruq oo dheeri ah iyo dayactirka unugyada. Natiijo ahaan, qofku wuxuu tababbaran karaa dhib iyo waqti dheer.
Dayactiridda unugyada wanaagsan waxaa loola jeedaa in marka aad culeyska culeyska ka qaadato kuwa aad loo isticmaalo; Si dhakhso ah ayay u soo kaban doontaa sababta oo ah habka dayactirka ayaa noqon doona mid ka sii wanaagsan.
Dhibaatooyinka (Boldenone Undecylenate)
Saamaynta isticmaalka boldenone aan la isticmaalins dhiska jirka
Inkasta oo aad soo bandhigtay dhamaan dadaalkaaga jimicsiga, weli ma dhicin? Waxay noqon kartaa mid niyad-jebinaysa ka dib markii aad u shaqeyneysid jimicsiga, weli wali kuma dhicin wax miisaan ah muruqaaga. Haddii aad marwalba raadineyso wax kaa caawin kara sida ugu dhakhsaha badan, si ammaan ah oo wax ku ool ah, ka dibna waxaan kuu sheegi doonaa qarsoodi.
Waxaad la yaaban tahay waxa loo yaqaan 'boldenone undecylenate' loo isticmaalo? Kadibna ma aadan arkin saamaynta saameynaya in natiijooyinka boldeone undecylenate galay. Inkastoo ay qaadato wakhti wakhti ah, steroidkani wuxuu u ogolaanayaa mid si aad uhogaliso murqaha. Isbarbar dhigista Boldenone vs Deca Durabolin ama Anadrol, natiijooyinka boldenone ma noqon doonto sida ugu dhakhsaha badan.
Faa'iidada leh waa in guulaha ay yihiin kuwo muddo dheer soconaya oo aaney ka dhalanin biyaha. Sidaa darteed haddii aad rabto inaad si wacan u eegto oo aad ula hadasho magaalada, Boldenone Undecylenate waa habka aad u tagto.
Kordhi cunto xumo
Waxaa laga yaabaa in aad ogtahay in aadan kari karin koolka muruqa haddii aadan isticmaalin wax ku filan. Sida gurigu u baahan yahay alaabta ceeriin ku filan, muruqyada waxay ubaahanyihiin carbohydrates, amino acids, iyo borotiinno badan oo iyaga ka mid ah si ay u koraan cabbirka. Nasiib darro, inta badan jirka ma yaqaanaan sida tan loo sameeyo.
Mararka qaarkood, jidh-dhisaha waxaa lagu talin karaa in uu cuno ugu yaraan kun oo kun oo kalooro dheeri ah maalin kasta si uu u soo qaato muruqyo badan. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay ka sii badan tahay.
Taasi waa cunto badan qof walba, dad badan ayaana laga yaabaa inay ku adkaato xitaa in ay cunaan kala bar. Waxaa laga yaabaa inaad ujeeddo u yeelato inaad qaadato kalooriyo badan oo kaliya si aad u ogaato inaad horey u joogtay ka hor xitaa inaad aragto isbadel ku yimaada muruqyadaada. Warka fiicani wuxuu yahay mid ka mid ah isticmaalka boldenone ee ku jira qaab-dhismeedka jirka waa in si wax ku ool ah loo xaliyo rabitaanka cunto yaraanta taas oo kaa caawineysa inaad gaarto hadafkaaga jirka.
Iyada oo qiyaasta qiyaasta saxda ah ee bilaashka ah, waxaad u badan tahay inaad aragto isbeddel weyn oo ku yimaada adiga Rabitaanka. Natiijada, waxaad cuni kartaa kalooriyada iyo borotiinka inta aad rabto. Isticmaalka gawaarida badan, waxay sii kordhineysaa qiyaasta glycogen ee unugyada muruqyadaada, taasoo ku siinaysa tamar badan inta lagu jiro jimicsiga. Sidaa awgeed, waxaad awoodi doontaa inaad kor u qaaddo culeys ka weyn intii aad horay u qaadday. Sababtan awgeed waa in jir-dhiseyaasha iyo cayaartoyda ay la tacaalayaan rabitaanka cunnooyinka marwalba ay doorbidaan boldenone undecylenate.
Awooduhu waa waxa keena cabbirka. Isku day inaad iska indho tirto guulaha xoogga oo waxaad ogaan doontaa in muruqyadaadu aysan helin baahidaada aad rabto inay noqoto.
Kordhinta xoogga waa mid ka mid ah isticmaalka balldenone ee jirka jirka. Waxay kor u qaadeysaa awooda qofka kaas oo aad u faa'iido leh gaar ahaan qorshaha weyn ee qarxa. Quruxda adiguna waa inay sidoo kale dhiiri galisaa waxqabadka ciyaaraha.
Iyada oo koror xoog leh, waxaad awoodi doontaa inaad qabato jimicsiyo badan oo aanad dareensanayn inaad adigu cadaadinaysid. Waxaad horay u sheegi kartaa waxa tani ka dhalan karto. Tababaro dheeraad ah macnaheedu waa in aad hadda qaadato muruqyo waaweyn.
Jarida waa mid ka mid ah isticmaalka Boldenone jecel ee jirka dhismaha. Waxay caan ku tahay jir-dhiseyaasha iyo tartamayaasha doonaya in ay ka baxaan dufanka xad-dhaafka ah isla markaana fiiri sida ugu dhakhsaha badan.
Boldenone Undecylenate waa steroid-ka jarista oo ah difaac fiican oo ka mid ah xajmiga murqaha. Marka aad ogtahay sida loo isticmaalo qalabka lagu qalajiyo wareegga jarista, waxaad la yaabi doontaa sida aad lumi doonto dhammaan dufanka aan loo baahnayn inta muruqyadaada ay weli taagan yihiin. Boldenone ka hor iyo ka dib sawirrada waxay cadeyn u tahay in aad tahay qof gebi ahaanba ka duwan.
Si aad u lumiso dufanka jidhka, waa in aad leedahay kaloori la'aan. Waxaa loola jeedaa inaad ku gubto kalooriyo ka badan kuwa aad isticmaalayso. Nasiib darro, miisaanka calorie wuxuu kaa dhigi karaa inaad lumiso unugyada muruqa ah maaddaama jirkaagu isku dayo inuu ku qanco baahida tamarta. Cunto wanaagsan ayaa kaa ilaalin kara arrintan, laakiin lama hubin karo.
Si looga fogaado murqaha luminta, aad ayaad u adagtahay inaad ku guulaysato; waxaad dooran kartaa inaad qaadatid qalab. Ma aha oo keliya in ay ka ilaaliso muruqa caatada ah ee luminta lakiin waxa kale oo uu leeyahay saameyn ku wanaagsan xaaladda jirkaaga.
Dhismayaal badan ayaa u isticmaala dhinaca hore ee wareegga jarista iyo joojinta inta lagu jiro qeybta danbe sababtoo ah waxay keeni kartaa saamaynta daawada estrogenic.
Qalabaynta (Boldenone Undecylenate) Cycle and Dosage
Qalabaynta (Boldenone Undecylenate) Cycle
Qalabaynta wuxuu ku koraadaa qaabab badan maaddaama aad adigu keligaa u isticmaali kartid ama adoo wada dhejinaya Cudurka Anabolic. Isticmaalka steroid ee aad doorato waxay kuxirantahay waxa aad rabto inaad gaarto.
Cirbadaha loo yaqaan 'Equipoise Cycle' ayaa loo kala saari karaa sida soo socota:
Bilowga wareegyada-Haddii aad isticmaaleysid Equipoisefor markii ugu horeysay, waxaa lagula talinayaa in aad qaadato 300-500mg of Testosterone Enanthate / Cypionate oo ay weheliso 400mg of Equipoise usbuucii. Wareegga bilowga ah waa inuu socdaa in ka badan afar iyo toban isbuuc. Inta lagu jiro waqtigan, qof kasta oo bilawga ah wuxuu ogaan karaa qadar faa'iido badan oo ka mid ah guulaha muruqa.
Heerka dhexdhexaadka ah - Haddaad rumaysan tahay in aad heshay heer dhexdhexaad ah oo aan weli hubin sida loo ordo Equipoise, waa kuwan dhowr talooyin; Isku day inaad la wadaagto Dianabol qiyaasta 25mg maalin kasta ilaa hal ilaa afar toddobaad. Qalabaynta, qiyaasta waxoogaa ayaa loo kordhiyaa 400-600mg asbuucii. Waqtiga ugu badan ee wareega ah waa inuu soconaa laba iyo toban toddobaad.
Heerka sare - Kuwa si fiican loo ogaa waxa lagula talinayaa in ay qaataan Boldenone Undecylenateat qadar ka yar 12kii toddobaad ee qiyaasta 600mg asbuucii. Trenbolone Enanthate wuxuu noqon karaa steroid ugu fiican si uu u xoqdo qiyaasta 400mg asbuucii.
Wareegga qalabixinta ayaa sidoo kale loo qoondeeyn karaa iyada oo loo eegayo himilada qofka. Waa kuwan labada qaybood;
Socodka wareegga ayaa noqon kara sidan;
Dianabol-30mg maalintii oo idil laga bilaabo toddobaadkii 1 illaa toddobaadka 8
Equipoise - 600mg toddobaadkii ayaa laga shaqeeyaa toddobaadkii ilaa 1.
Boldenone for jarista wareega:
Winstrol-35mg maalintiiba maalintiiba waxaa laga bixiyaa 1 ilaa todobaad 8
Equipoise - 500mg toddobaadkii ayaa laga shaqeeyaa toddobaadkii ilaa 1
Baaskiilada Boldenone iyo wareegga testosterone caadi ahaan way u egtahay;
Compound qiyaasta Duration
Equipoise 400mg / toddobaad 15 toddobaad
testosterone Enanthate 500mg / toddobaad 15weeks
Halkan waa mid kale oo ku saabsan sida loo ordo qalab;
Week Turinabol Equipoise Cootionate testosterone Nolvadex
1 50mg maalin walba 400mg asbuucii 500mg asbuucii
2 50mg maalin walba 400mg asbuucii 500mg asbuucii
3 50mg maalin walba 400mg asbuucii 500mg asbuucii
4 50mg maalin walba 400mg asbuucii 500mg asbuucii
5 50mg maalin walba 400mg asbuucii 500mg asbuucii
6 50mg maalin walba 400mg asbuucii 500mg asbuucii
7 400mg asbuucii 500mg asbuucii
8 400mg asbuucii 500mg asbuucii
9 400mg asbuucii 500mg asbuucii
10 400mg asbuucii 500mg asbuucii
11 400mg asbuucii 500mg asbuucii
12 400mg asbuucii 500mg asbuucii
13 500mg asbuucii 20mg maalin walba
14 500mg asbuucii 20mg maalin walba
15 20mg maalin walba
16 20mg maalin walba
17 20mg maalin walba
18 20mg maalin walba
19 20mg maalin walba
20 20mg maalin walba
Qalabaynta (Boldenone Undecylenate) Qiyaasta
Si looga fogaado dhibaatooyinka ka imanaya cabsida, waa inaad u hogaansantaa habraaca saxda ah. Xasuuso qiyaasta sare ee qiyaasta aad qaadato, inta badan waxaad halis ugu jirtaa dhibaatooyinka estrogenic. Sidoo kale, waa inaad qaadataa qiyaasta ku haboon si aadan ugu maqnaan karin faa'iidooyinka.
Caadi ahaan, qiyaasta Boldenone Undecylenate qiyaasta waxay kala duwan tahay mg mg 200-400 asbuucii. Ragga, qiyaasta 400mg waa loo dulqaadan yahay waana qiyaasta ugu yar ee intooda badani dooran doonaan inay qaataan. Qaarkood waxay u tagaan 600mg sababtoo ah waxay u dulqaadaneysaa sidoo kale saameynaha daaweyntu waa kuwo la maamuli karo.
Iyadoo la tixgelinayo qalabka loo yaqaan 'equipoise' ee hawsha dheer, ragga badani waxay maamulaan / leyliyaa hal cirbadood toddobaadkii. Qiyaasta Boldenone Undecylenate ayaa sidoo kale loo kala qaadi karaa laba ama saddex irbad yar. Waqtiga dheer ee Boldenone Undecylenate Undecylenate wuxuu u oggolaanayaa jadwalka duritaanka ee soo noqnoqda oo leh saameyno badan oo la maareyn karo.
Dumarka, qiyaasta caadiga ah ee Boldenone Undecylenate waa 50mg asbuucii. Iyada oo qiyaastaas loo isticmaalo, marin-habaabintu waa dhif, laakiin dareenka ayaa ku xiran qofka. Haweenka qaarkood waxay u dulqaadan karaan xaddiga 75-100mg, laakiin waxaa lagugula talinayaa inaadan bilaabin inaad qaadato qiyaasta noocan oo kale ah illaa aad ka hubisid in jirkaaga uu ku raaxaysto 50mg asbuuc kasta.
8 Equipoise (Boldenone Undecylenate) dhinaca saameyn ku yeelato'll rabto inaad iska ilaaliso
Dhibaatooyinka soo raaca ee Equipoise ma aha mid adag sida kuwa ay keento steroids kale. Kuwa garanaya sida loo isticmaalo qalabka si habboon, marar dhif ah ayaa ka cabanaya waxyeellooyin kasta.
Inkasta oo ay jiraan warar sheegaya in Boldenone Undecylenate loo bedeli karo estrogen, waxay u dhacdaa si aan caadi ahayn. Hawlgabka estrogen ayaa laga yaabaa inuu wax yar ka sarreeyo marka la barbardhigo boldenone vs deca, laakiin waa badh ka mid ah testosterone.
Si loo yareeyo darnaanta waxyeelada, waa inaad qaadataa qiyaasta saxda ah. Waxaad ku bilaabi kartaa qiyaasta ugu hooseysa oo kordhi marka jirkaaga uu isbedelayo. Markaad sidan sameyso, waxaad tijaabin kartaa dareenka jirkaaga ee ku saabsan steroid anabolic.
Haddii aad aragto waxyeelo sida barar cagaha ama lugaha hoose, dhibco guduud ah oo gudaha ama sanka ama jidhka, lafo xanuun, matagid dhiig, af aan caadi aheyn, carrabka kudheer, lallabbo, miisaanka oo kordho, carrab xumo, aan caadi ahayn dhiig-bax ama ku-tiirsan / saxaro madow / midab-madhan oo raadinaya gargaar caafimaad.
Inta lagu jiro iyo ka dib wareeggaaga qalabka, waxaa laga yaabaa inaad ku haysato cadaadiska testosterone. Hoos-u-dhac ku yimaada wax-soosaarka tijaabada ee dabiiciga ah ayaa laga yaabaa inay la yimaadaan waxyeelo kala duwan
Daraasad lagu sameeyey bakaylaha labka ah, iyaga oo ku dhejiyey Cudurka "Equipoise" wuxuu sababay dhaawac xagga taranka ah gaar ahaan baqshiinka testosterone. Ma ahan oo keliya hoos u dhaca wax soo saarka testosterone, laakiin heerarka estradiol ayaa sidoo kale kor u kacay.
Inta badan dadka isticmaala ragga waxay ku dhaceen heerarka hoose ee xoojinta serum leptin. Mid ka mid ah heerarka testosterone ayaa si aad ah hoos ugu dhici kara ka dib markii ugu horeeya ee duritaanka.
Qalabka dabiiciga ah wuxuu saameyn ku yeelan karaa adiga Nolosha SEX si xun u sababtoo ah xakameynta testosterone iyo awoodda estrogen ee ay la socoto. Waxay hoos u dhigi kartaa libido, waxaana laga yaabaa inaad dhibaato ka haysato inaad dareento inaad galmo sameysid.
Marmarka qaarkood, waxay sababi kartaa ginecomastia sidoo kale loo yaqaan nin boobs, xaalad ah oo hoos u dhigi karta kalsoonidaada. Ma jiro qof dumar ah oo doonaya in ay arkaan in ay kufilan yahiin muruqyada adag.
Weliba wali, xiniinyahaaga ayaa yarayn kara, tani waxay keeni kartaa tirooyin yar oo shahwo ah iyo kalsooni lumis ah. Iyada oo xiniinyaha hoos u dhiga, waxaad xaqiijin kartaa in caruurtu ay noqon karto halgan.
Maqa maqaarka leh
Maadaama ay labadaba tahay stabas anabolic iyo androgenic, Boldenone waxay u badan tahay inay ku siiso qaabka muruqyada iyo xajmiga aad marwalba rabto isla markaana isku mar ku darto sifooyinka labka ah sida finan iyo maqaar madow.
Isticmaalka waxsoosaarka saliidda oo sii badanaya iyada oo inta badan la socdo jabitaan. Inta badan, finanku waxay ku dhacaan wajiga iyo dhabarka. Nasiib darro, isticmaalka wejiga si loo yareeyo waxay noqon kartaa wax aan fiicnayn sababta oo ah finanka waxaa sababa kororka xayndaabka xayawaanka ee jirka.
Kelyaha iyo beerka waxyeelo
Cudurka dheecaanku wuxuu u horseedi karaa dhaawac soo gaadhay xubnaha, waxyeellada daaweyntu waxay ku saleysantahay isbeddelka cabbirka, qaabka, iyo shaqada kelyaha. Taasi waxay u dhacdaa ragga iyo dumarka labadaba, waxaana lagu daraa xaqiiqda ah in steroidkani yahay orrogenic.
Daraasad lagu sameeyay xayawaanka, bakteeriyada labka ah ayaa lagu maamulay qalab lagu ogaado calaamadaha beerka (beerka) iyo kalyaha (kelyaha) dhaawac. Kiiskan oo kale wuxuu ku dhacaa bini-aadanka, tanina waxaa lagu dari karaa daraasad laga heli karo Jareerka Isboortiga, Daawada iyo Jir-dhiska Jirka.
Dumarku waxay yeeshaan sifooyin lab ah
Dumarka ku jira qalabka cuntada waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo fuuq-baxa. Taas macnaheedu waxa weeye waxay tahay inay ogaadaan in ay bilaabeen inay horumariyaan sifooyinka iyo sifooyinka kuwaas oo kaliya inay ku dhacaan ragga. Tusaale ahaan, waxay ku guuleysan karaan qiyaasta muruqyada ee ay raadinayaan, isla mar ahaantaana ay kor u qaadaan timaha aan loo baahnayn. Dumarku ma jecla xididada korkooda, tani waxay noqon kartaa mid soo noqosho ah.
Si lagu daro, haweenka ku jira qalabeynta ayaa laga yaabaa inay waayaan qaar ka mid ah astaamaha haweenkooda, waxay kordhiyeen gardarrada waxayna yeeshaan codka qoto dheer.
Marka loo barbardhigo steroids kale, qalab waxay keenaysaa saameyn aan waxyeello lahayn habka wadnaha iyo xididdada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira fursad ah in mid ka mid ah la silciyo saameyn aan fiicneyn oo ku saabsan heerarka kolestaroolka. Sida steroid-ka kale oo kale waxay hoos u dhigi kartaa HDL (kolestarool wanaagsan) oo kor u qaadeysa LDL (kolestarool xun)
Si arrintan loola dagaallamo, u fiirso nafaqada habboon adigoo cunaya cunto caafimaad leh kuna dar mawduucyada wadnaha ee barnaamijka tababarka.
Isku-daalinta Qalabka Cudurka ah wuxuu kaa dhigi karaa xanuun ku dhaca wadnaha. Sababta arrintani waa sababta oo ah isticmaalka wuxuu keeni karaa xaalado halis ah oo halis ah.
Dareemaha ayaa xoojin kara xayawaanka ragga ah waxayna sidoo kale sameeyaan dad aan waligood ku dhicin inay u xanuunsadaan.
Qalabaynta (Boldenone Undecylenate) Cuntada Homebrew
Qodobka Boldenone Undecylenate ee dareeraha steroid waa sida soo socota
EQ 300mg / ml Cuntada 100ml
Saliidda canabka ah 62.5ml
Boldenone Cypionate waa dhererka gaaban marka la barbardhigo mid aan qarsoodi ahayn. Boldenone Cypionate kala badh noloshu waa waqti aad u dheer iyo wakhtiga ogeysiis bolleone cypionate wuxuu socon karaa illaa iyo hal sano iyo badh. Tani waxaa loola jeedaa, qiyaasta Boldenone Cypionate waxay u baahan tahay in lagu duro irbado badan. Lama yaabin kuwa aan jeclayn cirbadaha aysan isticmaalin steroids Boldenone Cypionate. Qiyaasta Boldenone Cypionate ee caadiga ah waxay u dhexeysaa 100-150mg per ml.
Boldenone Cypionate steroid waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo fardaha si ay uga caawiso miisaankooda iyo sidoo kale hagaajinta xarkooda timaha iyo xaaladda jireed ee guud.
Boldenone Acetate oo loo yaqaan 'Equipoise Short-acting acting' waa steroid oo leh qashin kale oo kuxiran. Badanaa waxaa loo isticmaalaa tartanka fardaha, laakiin kuwa jidhka u jecel waxay jecel yihiin Boldenone Acetate faa'iidooyinka gaar ahaan murqaha murqaha. Qiyaasta Boldenone Acetate waa 400-800mg la qaato hal mar toddobaadkii.
Boldenone Acetate Cunto qoyan (liiska)
Cuntada Boldenone Acetate;
2% Cimilada Benzyl 2ml
100g Boldenone Acetate budada 80ml
Boldenone Cypionate Cunto liin (liiska)
Cuntada Boldenone Cypionate waxay ka kooban tahay;
1ml Khamriga Benzyl
15ml Ethyl oleate
Saliid 15ml Saliid
Halkee laga helaa Boldenone?
Haddii aad tahay jirka jirka ah ama cayaaraha, waxaad ku jirtaa fiirin waqtiga oo dhan wax aad ku saari karto kubadaada. Hase yeeshee wadamo badan, si kastaba ha ahaatee, isticmaalka Cudurka Anabolic waa la mamnuucay, waxaana dhici karta in ay kugu adkaato inaad galiso. Si kastaba ha ahaatee, si fudud ayaad u geli kartaa iyaga oo u maraya websaydh sharci ah. Sidoo kale soo iibsashada internetka ayaa leh faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay geedi socodka wax iibsashada ah.
Internetka, waxaad ka akhrin kartaa wax dheeraad ah steroid aad rabto inaad iibsato. Tusaale ahaan, halkan waxaad ka akhrisan kartaa macaanka Boldenone Acetate, Boldenone Cypionate homebrew, waxa Boldenone loo isticmaalo iyo wax kasta oo kale oo aad rabi laheyd inaad ogaato waxa ku saabsan. Marka aad go'aansato inaad soo iibsato, horeyba waad ufaraxsan tahay dhammaan macluumaadka ku saabsan isticmaalka. Iyo inaad ka dhigto xitaa walwal la'aan walwal ah, dhammaan macluumaadkaan waxaa laga heli karaa raaxada gurigaaga ama xafiiskaaga.
Dukaamada online waxay iibiyaan qiimo fiican marka la barbar dhigo dukaamada jir ahaaneed. Qiimaha Boldenone wuxuu noqon doonaa mid aad u jaban online, sababtoo ah waxaad u badan tahay inaad heshid heshiisyo wanaagsan. Intaa waxaa dheer, waxaa laga yaabaa inaad hesho qiimo dhimis ku saabsan iibsiyada waaweyn. Yaa jecel inaan kaydsado santuuq dheeraad ah?
Ma ogtahay inaad Boldenone ka iibsan kartid adigoon cidna ka warqabin? Internetka, waxaad ka hortageysaa su'aalaha badan ee aad dareemaysid in ay tahay waxoogaa xishood leh. Adiga iyo shirkaduhu waxay og yihiin waxa ku jira xirmadaada iyo cid kasta oo kale waxay arki doontaa muruqyada bulashada.
The Boldenone iibka waa tayo gaar ah oo waligana kuma niyad jabi doono. Waa lagama-maarmaan mana waligeedna halis gelin doonin caafimaadkaaga. AASraw oo ah shabakad sharci ah oo soo saartey alaabteeda iyada oo la isticmaalayo qalabka farshaxanka. Waxaa laguu xaqiijin karaa in Boldenone Badeecadeenu ay ku siin doonto natiijooyinka aad rabto.
Waxa kale oo aad rabi kartaa inaad gashato qalabka fardaha. Iibso maanta, tuubadaada marnaba ma faraxsanaan doonto.
Qalabeynta (Boldenone Undecylenate Injection) Warbixin farsamo, bogga 1-9
Falanqaynta steroid, oo ay sameeyeen Hugh LJ Makin, DB Gower, bogga 815-823
Falanqaynta Kiimikada ee Xayawaanka aan Dawada lahayn ee Daawooyinka Xoolaha ee Cuntada, oo ay sameeyeen JackF. Kay, James D. MacNeil. Jian Wang, bogga 193
Masteron Enanthate Hawlaha dheer ee Androgenic Anabolic steroids (AAS) Sida Loo Doorto Qalabka Dabeecadda Qalabaynta Xiddiga 12